Abafundi bacasuke bashisa amakilasi amadala | News24
Abafundi bacasuke bashisa amakilasi amadala
Ventersdorp - Abafundi besikole samabanga aphakeme iPhiri Secondary School endaweni yaseBoikhutso eVentersdorp bacasuke uMnyango wezeMfundo esifundazweni iNorth West kangangokuba bashise amakilasi "abesebolile".
Umholi womphakathi uThemba Motshwene utshele abephephandaba iPotchefstroom Herald ukuthi laba bafundi bebefundela esikoleni esidala kusukela ngo-1999. Uma kunezimvula ezihambisana nesiphepho, amakilasi abegcwala amanzi.
“Yize kwakuhlezi kunemihlangano eminingi, ushintsho lwalungenziwa ngaphandle kokuthi kushintshwe othishanhloko. Iningi labafundi asebaqeda banezingane ezifunda lapha ngaphansi kwesimo esifanayo nalesi abasishiya," kusho yena.
OLUNYE UDABA: Uthishanhloko 'ungqimuze' abafundi odongeni
UMnyango wezeMfundo kulesi sifundazwe wafika ekuqaleni kwalo nyaka, wathembisa abafundi kanye nazinye izinhlaka ezibamba iqhaza kulesi sikole ngokuthi lukhona ushintsho abazoluletha.
"Ngesikhathi kubonakala ukuthi alukho ushintsho olwenziwayo, abafundi bavele bavuka umbhejazane bashisa amakilasi. Sekusele igama kuphela kulesi sikole ngoba amakilasi ashe angqongqa," kubika leli phephandaba.
UFreddy Sepeng, okhulumela uMnyango kulesi sifundazwe uthe bakugxeka kakhulu ukushiswa kwempahla wathi kunenkampani yabakhi ezoqala umsebenzi wokuvuselela lesi sikole ekupheleni kwale nyanga.
"Abafundi baGrade 12 yibona abathinteke kakhulu kulokhu kodwa uMnyango uzozama ukuhlela amakhempu lapho abafundi bakamituletsheni bEzofundela khona ukuze balungiselele izivivinyo," kusho yena.